Tani waxay noqon kartaa iPhone 7-ka oo aan ku arki doonno muddo sannad ka yar | Wararka IPhone
Miguel Hernández | | iPhone 7, dhowr
Aniga oo og in iPhone 6S uu ahaan doono mid la mid ah iPhone 6, maaddaama magaca loo yaqaan 'Cupertino' loo adeegsado moodooyinka "S" ee iPhone-ka, fikradaha iyo xanta ayaa durbaba bilaabay inay diirada saaraan sida mustaqbalka iPhone 7 u eg yahay. IPhone 7-kan ayaa shaki la’aan ah qaabka ay inbadan oo naga mid ahi jeclaan lahaayeen inay ku arkaan bandhigyada Apple Store ee 2016, oo leh nashqad aad u qurux badan iyo dhammaystir dhab ahaantii ina xusuusinaysa mid ka mid ah moodooyinka ugu quruxda badan ee ay Apple soo saartay taleefannadeeda casriga ah., iPhone 4.
Fikradan ay soo saareen Ivo Maric iyo Tomislav Rastovac waa mid xad dhaaf ah oo qurux badan. Sida aan ku arki karno fikraddan, geesaha waxay sii wadaan inay ilaaliyaan geesaha qalooca, iyadoo muraayad gadaal looga soo celinayo qaabka ugu fiican ee iPhone 4 kaas wuxuu ka dhigayaa inuu u iftiimo sida wax aan jirin oo kale oo dhinacyada loo yareeyo wax aan waxba ka xigin. Shaki kuma jiro inay tahay mid ka mid ah fikradaha ugu quruxda badan iPhone 7 ee aan arki doonno, oo xitaa laga yaabo inuu dhaafo nooca rasmiga ah ee iPhone 7.
Laakiin naqshaddan quruxda badani waxay qarineysaa tan ugu xiisaha badan, waxay ka koobnaan doontaa shaashadda Quad HD oo dabcan lagu daboolay muraayad safayr ah oo kugu farxi doonta isticmaalkeeda, adoo siinaya adkaanta iyo ilaalinta ugu badan, si kastaba ha noqotee waxaan la yaabnay in wararka xanta ah ee hadda aan la helin ilaa. ee ah Aqoonsiga Taabashada lagu dhisay shaashadda. Si kastaba ha noqotee, waa inaan xasuusnaano inay taasi tahay, fikrad fudud, oo aynaan u arki doonin wax xitaa isku mid ah., laakiin kama dhimi karno waxa ay leedahay, iyo qaabeynta fikraddan ayaa si fudud u muuqata.
Shakhsiyan, labada moodel ee iigu quruxda badan ilaa maanta aniga waa iPhone 4 oo madow ah iyo iPhone 5S oo ku jira cirro, ma muujinayo dookh gaar ah qaabka ugu dambeeyay ee iPhone, taas oo macnaheedu ahayn inay shaki la’aan tahay mid ka mid ah ugu qurux badan suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 7 » Tani waxay noqon kartaa iPhone 7 ee aan ku arki doonno wax ka yar sannad
Hagaag, ma garanayo adiga laakiin ma jecli geesahaas
"Tani waxay noqon kartaa ..."
"Waxay u badan tahay inaanan arki doonin wax xitaa la mid ah ..."
Puff waxa kaliya ee aan ka helay wixii aan ku arkay wuxuu ahaa Dock si loo waafajiyo oo looga qaado aaladda adoo taageeraya.  waa inuu hadda dibadda u bixiyaa. Samsung ayaa bixinaysay muddo dheer
hahahaajajajajaja ayaaba durba ka sii dhamaanaya waxa ay dhigayaan ... waxayna ku bilaabayaan fikradaha, waxaa jira jebus! na wada caawi
Jawaab Adrian C Berrio
Fool xun, waxaan rajaynayaa inaysan taasi ahayn, waxaan rajaynayaa inay si aad iyo aad ufiican u xuubsiibato, salaan
Wax kastoo ay tahayba
Badhan badhanka guriga fadlan
Waan jeclahay tusaalaha. Waxa kaliya ee aan i qancin karin ayaa ah geesaha shaashadda. Aniga ahaan, la'aan jir, uma muuqato wax fiican. Naqshadeynta ayaa luntay xagga hore, kore / hoose
ummm sida qabow ... waxyaabaha S6 horeyba u wadato sax? 😀
Paul Esquinazi dijo
Shaashadda gees ku taal ayaa iska ilowda hadda ... dhammaan fikradaha sanadaha oo dhan la sheegayo iyo dhammaadka waxba ... Fikraddaas ayaa u muuqata inay qaadanayso wixii ka khaldamay iphone 4, muraayadda gadaashiisa, oo aan waxba u burburin waana macno darro
Jawaab Pablo Esquinazi
Aan aragno ... haddii aad jeceshahay S6 uma baahnid inaad sugto inta iPhone 7 ka soo baxayo ama wax kasta oo tusaalahan la yiraahdo markii uu soo baxo. Laakiin kani maahan iPhone, waa nuqul naadir ah oo Samsung ah oo aad u fool xun runtii. Hadday runti sidaas tahayna, way iska cadahay inay noqonayso iPhone-kii ugu horreeyay ee aanan iibsanayn.
«Safayr kugu farxi doona isticmaalkeeda, oo ku siinaysa adkaanta iyo ilaalinta ugu badan» hahaha adayg iyo safayr safayr, sidee buu kan ugu fiican yahay ...
Jawaab Francisco Quijada
Iphone 4 wuxuu isu badalay Iphone 7, male male!
Siri sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xakameyso Apple Music amarrada codka